Arsenal oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karto Kieran Tierney & qiimaha ay markii hore gudbiyeen oo la ogaaday. – Gool FM
(London) 22 June 2019. Kooxda Arsenal ayaa loo sheegay qiimaha ay ku heli karaan xiddiga Celtic (Kieran Tierney), waxaana loo sheegay iney kaliya ku heli karaan qiimo ka badan 25 Malyan oo Pound maadaama laga soo diiday dalab dhan 15 Malyan oo Pound.
Gunners ayaa damacsan iney daafacaan bidix keento Emirates Stadium si uu badal ugu noqdo Nacho Monreal oo la fahamsan yahay inuusan mustaqbal dheer kusii laheyn kooxda, sidoo kalana xagaagan uu dhacay heshiiska uu ku joogo waqooyiga London.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Scotland ayaa dooneysa iney dhageysato dalab walba oo laga soo gudbiyo xiddiga dadabka bidix ka ciyaara (Tierney), wax cadaadis ah ma saarna kooxdaan maadaama 22-jirkaan uu kula jiro heshiis dhamaanaya 2023.
Unai Emery ayaa doonaya in kooxdiisa meelo badan laga hormariyo maadaama ay waayeen kasoo qeybgalka UEFA Champions League, wuxuuna si aad ah xoogga u saari doonaa inuu hagaajiyo dhanka daafaca.
Gunners ma awoodo iney lacagahaas ka bixiso hal ciyaartoy maadaama lasoo warinayo in 45 Malyan oo Pound kaliya u qorsheysay iney suuqa ku bixiso xagaagan.
Waxaa u wanaagsanaan laheyd kooxda Gunners iney 15 Malyan oo Pound ku hesho Tierney, taasi oo ka sahli laheyd iney daqliga u haray hal ama laba ciyaartoy kale ku keensato.
Sanchez oo sharaxaad ka bixiyay farqiga u dhaxeeya marka uu u ciyaarayo xulkiisa Chile iyo kooxda Manchester United